Walwal kale oo soo wajahay Liverpool kaddib markii Mohamed Salah dhaawac looga saaray xulkiisa Qaranka Masar – Gool FM
(Cairo) 13 Nof 2019. Kooxda Liverpool ayaa walwal kale uu soo wajahay kaddib markii dhaawac looga saaray Mohamed Salah xulka qarankiisa Masar ee ciyaaraha kulammada isreeb-reebka Koobka qarammada Afrika.
Weeraryahanka Liverpool ee Mohamed Salah waxaa soo gaaray sida la warinayo dhaawac dhanka canqowga ah oo dib ugu soo laabtay waana canqowgii uu hadda ka hor ka dhaawacmay.
Dhaawacan canqowga ah ayaa Mohamed Salah uu markii hore soo gaaray kulan ay kooxdiisa bishii hore la dheeshay Leicester City, waxaana dhaawacay xiddiga la yiraahdo Hamza Choudhury, hadda ayaana la warinayaa in isla dhaawacaas uu dib ugu soo laabtay markale.
Waxaana dhaawacan canqowga ah uu dib ugu soo laabtay wiilka reer Masar kulankii Axaddii ay la ciyaareen dhiggooda Manchester City ee hroyaalka Premier League kaddib markii uu dhibaatadaas gaarsiiyey laacibka reer Brazil ee Fernandinho.
Si kastaba ha noqotee xiriirka kubadda cagta Masar ayaa xaqiijiyey in Mohamed Salah uusan ka qeyb qaadan doonin labada kulan oo ay la kala ciyaari doonaan xulalka Kenya iyo Comoros ee isreeb-reebka koobka qarammada Afrika.
Kooxda Liverpool ayaa ka walaacsan dhaawacan kale oo la sheegay inuu soo gaaray Salah, maadaama sidoo kale horay loo shaaciyey dhaawac xiddigooda muhiimka ah ee Andrew Robertson.
Salah oo loo sheegay inuusan labada kulan ee soo aaddan xulkiisa Masar u ciyaari karin ayaa haatan diiradda saari doona sidii uu dhaawacan uga soo kabsan lahaa ka hor kulanka ay kooxdiisa Reds la leedahay Crystal Palace 23-ka bishaan.